Spain yakabuda panyika mepu kusvikira pakuguma XV remakore, mushure Castilian-Aragon mubatanidzwa muna 1479. Kusvikira ipapo, pamusoro katsi Peninsula , paiva akawanda mumwe anoti. Kunyange vakanga zvikuru chokuita mumwe, asi mumwe nomumwe wavo aiva madzimambo avo uye navanamambokadzi. Spain pachayo hariko.
Princess Izabella Kastilskaya
Kutaura zvazviri, iye ndiye wokutanga uye zvichiri airemekedzwa chaizvo Mambokadzi Spain. Isabella akaberekwa muna 1451 uye aiva mwanasikana Juan II, uye hanzvadzi Henry IV. Akakura kure yamambo, makadzika Arévalo, iyo akarererwa pauMwari.
In hwake, Isabella kumbofunga pamusoro simba roumambo, sezvo nyika akatonga, Enrique wake mukoma, pemurairo kutora chigaro apo hanzvadzi yake yaiva nemakore matatu bedzi. Kuwedzera mhuri youmambo akanga mumwe mwana, ainzi Alphonse. Chete kuyaruka, musikana akakwanisa kuoneka mumuzinda. Makuhwa, hadzimbotauri uye anonyengera nezvaiva paiva wokumwe kwaari - iye vaifarira kunyengetera kuna Mwari, kwete kuti muraire pasi.
Race nokuti simba
Ndinofanira kutaura kuti mukoma Isabel, Enrique IV kuti, youmambo vaiva remadunhu- "El vasina simba." Uye, sezvo vachiti, kwete pasina chikonzero. Muna 1462, mudzimai wake akabereka mwanasikana Juan ane Portugal, uye akapotsa zvose zvaiva nechokwadi kuti baba mwana anoda wake Beltrán of luola, nashe pamusoro Albuquerque.
ezvinhu ichi dzinongoita kukanganiswa enyika zvimwe zviitiko muna 1468 The chokuti panguva mukoma Isabella akafa zvisingatarisirwi uye Enrique Alfonso, uyo achangobva akatendeuka makore 14 okuberekwa. Pakarepo mubvunzo akasimuka: Ndiani achava inotevera wenhaka kune Castilian choushe?
By mutemo, korona yakanga nhaka mwanasikana Henry IV pamusoro Castile Joanna the Beltraneja. Asi nokushorwa, zvinosanganisira chemhando kwamachinda, ane musoro aiva Bhishopi Mukuru Toledo, uye havana kunzwa mubvandiripo vana vamambo, saka havo Princess Isabella.
Pashure kufirwa pressurized Alfonso Enrique kwamachinda akamanikidzwa kupinda chibvumirano nehanzvadzi yake Isabella, maererano uyo aizova mugari wenhaka yake. Asi mambo aisa mberi muchindakadzi rimwe mamiriro - aisakwanisa kuroora vasina kubvumirana nazvo. chibvumirano ichi, iye chaizvoizvo akasimbisa wake kusavimbika, saka wakati pauri chete mwanasikana wake Juan yakatevedzana. Zvisinei, mudzimai wamambo akanga asiri kuenda mapfumo nyore, uye vaishuva kuti rehabilitated sezvo pamberi wake uye dare uye vanhu. The kunetsana akanga kutanga.
Iye yakatanga muna 1469, Isabella asati akasarudza kuroora Ferdinand II Aragon pakavanda. Ipapo Enrique IV akazivisa zvakare mwanasikana wake Juana mudyi wenhaka yake, achipomera hanzvadzi yake kutyora zvibvumirano. Kusagutsikana uku kwakakonzerwa ne kurambirwa Mambo Isabella kuroorwa Portuguese mambo Afonso V, munin'ina wake Juans.
Mambokadzi Spain rokutanga
Pakafa Enrique IV munyika wakabvira hondo yevagari chaiye - vatsigiri Juana Beltranehi uye Isabella pamusoro Castile vakarwa upenyu-uye-rufu kurwisana. The ndopakaperawo yokurwisana iri hondo Toro, kwakaitika muna 1479 pashure pokunge yakasainwa neDare Castilian-Union of Aragon, iro chakavakwa uye Isabella I pamusoro Spanish choushe.
Panguva yokutonga kwake, sezvariri kwemakore 20-30, iye nomurume wake Ferdinand II akakwanisa chokubatanidza anenge ose Spanish nyika. Muna 1492 zvakaitika kukunda Granada uye kukunda Canary Islands, kamwe anonzi vachifara. Ndizvo achitsigirwa Queen Isabella, Columbus ndakaenda kundotsvaka munyika itsva uye vakaona America. Vomunguva, uye zvikurukuru Hernando Del Thumbs, akaona murume akadzikama hunhu, softness uye simba, asi aigona kupa kuomesa mirairo uye kuita zvisarudzo zvakanaka uye zvisingatarisirwi.
Indomitable mweya zvakanzi akaratidzwa pachena panguva sei iye nomurume wake panguva nechisimba Spanish mauto Granada muna 1491 iye ruzivo vose vicissitudes hondo uye akaenda nomurume wake kukunda guru. Panzira, muna Granada, muna Royal Chapel, uye akavigwa vaviri.
Spain kuti Queen Isabella I akabereka vana vanomwe. Vazhinji vavo akatambura kwemakore akawanda. Rokupedzisira uye zvikuru kwazvo akundwa kwaari muna 1497 raiva rufu mwanakomana wake uye mugari wenhaka pachigaro Don Juan ane Asturias. Isabella akafa muna 1504 aine makore 53. mutsivi Its aiva mwanasikana Juan, gare gare remadunhurirwa rokuti Mad, iyo ichiri upenyu dzamambokadzi kurondwa kunyanyisa chaizvo hunhu. Wapiwa chokwadi ichi, vakawanda Mamiriro ezvinhu kwakaitwa mukuda.
Isabella pamusoro Portugal
Murume wake Karl V Gabsburg kunyange akasimba vakabatana yose Spanish nyika, uye pashure kuziviswa mutongi wake Hutsvene hweRoma, Isabella anova zvakawanda uye Mambokadzi Italy, Germany, Sisiri uye Naples, uyewo Duchess pakati Burgundy. It akagara kwemakore akawanda regent wokuSpain, sezvo murume wake akanga kazhinji ndisipo, mubasa rinokosha ruzhinji mabasa pamba.
Isabella - Mambokadzi Spain, akaberekwa October 24, 1503 mwanasikana mukuru mumhuri Portuguese King Manuel I uye mudzimai wake wechipiri - the Infanta Maria pamusoro Castile uye Aragon. murume Future, Charles V aiva naye hama. mubatanidzwa wavo akanga nemasaini November 1525 nezvikonzero zvematongerwe enyika, asi, pasinei neizvi, gare gare achiri ikava rudo muchato. Sezvataona ne vomunguva yake, Isabella akanga akangwara chaizvo uye akanaka.
Akafa achiri Toledo, pakutanga May 1539, kana kurwara dzihwa, kana mabayo. Apo Isabella aiva nepamuviri kuti rechitanhatu nguva. Emperor haana pedyo, asi pakarepo rufu wake amurova kusvika pokupedzisira. kumbobvira pashure dambudziko iri angadai kuroorwa, uye vose hwake aipfeka nguo chete rutema.
Elizabeth French (Valois)
Iye akaberekwa April 2, 1545 Elizabeth ari mumiririri yakakurumbira Valois. baba vake - mambo France, Henry II, uye mai vake - Ekaterina Medichi. Pasinei nokuti Princess pachakatanga yatsidzira mumwe Spaniard, kuti Infante Don Carlos, akaroorwa nomumwe murume.
Zvakaitika kuti rugare chibvumirano wakasainwa pana Cateau-Cambrésis muna 1559 pachiitiko hondo pakati Spain uye France aiva mumwe nguva apo Sine quá asiri kuti mhedziso yayo yakanga muchato Princess Elizabeth uye Mambo Philip II. Yakanga chete kuyaruka apo aifanira vajaire upenyu hutsva pamusha. Vomunguva akacherechedza kuti Elizabeth - Queen of Spain - vaisagona kubatsira asi kuyemura runako rwavo, fashoni mbatya uye naka tsika. Izvi iye akakunda kwete chete murume ruvanze, asi rudzi rwose.
Chokwadi kuti murume wake aida uye akachengeta nayo, zvinotevera chokwadi: Kana wechiduku mambokadzi akarwara chibhokisi, Philip II akapotsa haana kusiya mudzimai uye vakazvipira kutarisira kwake. Izvi pasinei nengozi kuti abate rako! Sezvo chikazozikamwa, mambo venga kwazvo, ine utsinye uye pakuverenga, asi pashure muchato wake akava murume ane rudo uye vachifara munhu.
Queen iyi Spain kashanu aiva nepamuviri, asi akanga asina kupa murume mugari wenhaka murume pachigaro. Kokutanga Elizabeth akabereka mwanakomana, asi akafa maawa mashomanana. Zvichitevera kuberekwa yakanga magadzirira, sezvo utano akanga asina simba chaizvo. Asi muna 1566 iye akabereka mwanasikana, Isabella Klaru Evgeniyu, uye papera gore - Catalina Micaela. Muna 1568, panguva imwe nepamuviri uye pakusununguka kundikana, iye akafa ava namakore 23. Nokukurumidza namambo akaroorwa nguva wechina. King Vakasarudzwa akava nemuzukuru wake, Anna Avstriyskaya, akamupa mwanakomana, kwenguva akamirirwa mugari wenhaka chigaro.
History Spanish anoziva zvakawanda vanamambokadzi munokosha nezvenyu zvizere, asi mune imwe nyaya hazvibviri. Saka ngatitaurei pamusoro vachiri vapenyu.
Sophia Greek uye Danish
Iye akaberekwa muAtene, November 2, 1938 Sofia - mumiririri Glücksburg imba. mai vake - Princess Frederica pamusoro Hanover, uye baba vake - King Paul I. Uyezve, wakabatana Russian dzemhuri youmambo Romanov uye tine chikuru-muzukuru Grand Duchess Olga Konstantinovna, uyo akava mambokadzi Greece, kuroora George I.
Sophia aiva mwana mukuru mumhuri. Kunze kwake, kunyange akanga ane hanzvadzi, uyo pashure pokufa kwababa vake, mambo weGirisi Constantine II, uyo muna 1967 paakabviswa pachigaro, uye Irena hanzvadzi duku. Mushure nyika yakaita bumbiro idzva, wamambo mazita zvachose zvarinoreva.
In pemwedzi May 1962 Sofia The Greek uye Danish akaroora Spanish Prince Juan Carlos. Aifanira kusiya chiKristu uye vanogamuchira kutenda wake - yeRoma. Pakapera November 1975, pakarepo pashure pokufa mudzvanyiriri Franco, Juan Carlos akazivisa mambo. Saka Greek Princess akava Mambokadzi Spain. By ikozvino roumambo nemudzimai ane vana vatatu nevazukuru masere.
Kunze kwokuti Sofia anoenda kwese nomurume wake, zvose mukati munyika uye kunze, anenge avimbisana, uye rudo. Iye purezidhendi yake mari, izvo 1993 dzinounzwa zvakawanda zvokushandisa, inobatsira kuti kusunungurwa kwaizotevera rutsigiro upfumi Bosnia and Herzegovina. Uyewo, ikozvino aimbova Mambokadzi Spain chinotarisa dzidzo uye rutsigiro vanhu vakaremara. Asi vainyatsotarisirwa inofa kuti Fund, hwakasikwa zvakananga kurwisa kupindwa muropa nezvinodhaka.
Zvino tinogona kutaura nechivimbo kuti Sofia - Queen kwete chete nokuda ropa asiwo basa, sezvo kusimba pamafudzi ake mutoro yose matambudziko emhuri, kubvira nguva nenguva kuoneka kumba. Zviri virtuoso smoothes mukurwisana zvose yomuka nezvichaitika ine panzvimbo yemwana hasha wake.
Letitsiya Ortis: mukadzi vanhu
Iye akaberekwa September 15, 1972 mune rimwe guta duku, iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero Spain, mumhuri wenhau Hesusa Ortisa Alvarez nomureri Mary Rokasolano. I Laetitia ndichiri hanzvadzi mbiri: dangwe - Thelma uye muduku - Eric, iyo refu aitambura nokuora mwoyo, uye muna 2007, vakafa zvinodhaka ovhadhozi. Pashure chikoro, iye Kukoreji, akarongeka paUniversity of Madrid, kwaakabereka kudzidza uye akava mutori.
Ndisati akasangana mugari wenhaka kuna Spanish Crown Prince Philip Letitsiya Ortis akakwanisa kuti shasha basa. Kokutanga akaroorwa apo akanga ava nemakore 26 okuberekwa. sarudzo yake yaiva Alfonso Perez, mudzidzisi mabhuku. The muchato kwenguva duku uye vakadonha Papera gore, aimbova mudzimai akapatsanura norugare uye vachiri kuramba noushamwari.
Crown Prints Kuvshinov, mwanakomana waMambo Juan Carlos I wake Sophia muGirisi, tanga akasangana Letitsiey Ortis muna 2003. Panguva iyoyo akanga ari journalistic feya pokuwa mafuta ngarava yacho Spanish mabhanga. Patakasvika, akakurumidza kutora mashoko ari chiitiko, panguva kumachinda. Kubva kwavari akaziva kuti pano sezvo asvika uye Prints Kuvshinov.
Zvinokosha kucherechedza kuti bvunzurudzo wevana voumambo haana zvimwe guru journalistic budiriro - vose anoziva vokuSpain havachanzwi kunyanya mwoyo kunzwa kuti umambo. Uyezve, hapana chakavanzika Prints Kuvshinov munhu wakashama chaizvo munhu, wose zvikuru kukurukurirana vanhuwo zvavo. Akapa yekutaura kuna Leticia, izvo akataura yose ezvinhu uye akazokumbira nhamba dzake dzorunhare. Pashure paizvozvo, vakuru vanoda akatanga kudanana, asi kutanga misangano yavo dzakanga muchivande, sezvo Firipi akanga achitya mhosva kubva kuvabereki vavo. Mwedzi mishomanana gare gare Letitia kurega basa rake, uye mazuva mashomanana gare gare, dzakazivisa varambane.
The kurwisa pazuva Princess pamusoro Asturias
Hatigoni kutaura kuti hama chikomba, uye rose Spain, chiziviso zvakandishamisa chaizvo. Leticia mambokadzi ramangwana uye Firipi vakaroorana May 22, 2004 The chiitiko yatepfenyurwa vose chikuru terevhizheni migero, saka kuti mhemberero aigona kuona zvinopfuura hafu yemiriyoni vanhu pasi pose. Muchato, muchindakadzi akaita rhinoplasty. Maererano pamutemo shanduro, Leticia akawana vachiberekwa curvature yacho nasal septum. Zvisinei, paiva hurukuro journalistic yeChina, zvichipomerwa kuvhiya kuitwa nokuti haina zvakanaka ndokutarira mapikicha pamwechete muchinda.
Ndinofanira kutaura kuti kurwisa haana kugumira ipapo. October 31, 2005 akaberekwa mwanasikana murume nomudzimai vokutanga Leonora, uye makore maviri gare gare, musi waApril 29, akaberekwa wechipiri - Sofia. Azvarwa, ramangwana Queen Leticia akatanga chisanyanya aimbova chimiro, saka akasarudza kugara yakaoma kudya. Somugumisiro, mune shomanana, akanga mutete chaizvo. Uyu mhosva anenge mukusimudzira neanorexia pachena, apo kuyeuka kuti, zvinoda muenzaniso muduku Spaniard. Izvi wakatsamwisa sefungu nokutsoropodzwa uye mumigwagwa achitsutsumwa. Kuitira kudzivisa zvimwe mhosva kwaari, muchinda akamanikidzwa kusiya nomudzimai wake pazororo, apo chaizvoizvo akamukurira kudya zvakanaka.
Mambokadzi Spain Letizia
Muna June 2014 Mambo-gore 76 okuberekwa Juan Carlos I abdicated. About sarudzo yake, namambo yakazivisa pachake rinokosha kero rudzi. Akanga anotsiviwa nomwanakomana wake Firipi, Muchinda Asturias. Saka aimbova paterevhizheni wenhau, akava Mambokadzi Spain. Kamwe Letitia akaroorwa Prince, aifanira kurega saka aimuda pantsuit nemapfekero mune zvakawanda zvechikadzi nguo. In yake wenguvo paiva kwezvokufuka madhirezi uye siketi pazvinhu.
Nokufamba kwenguva, vanhu venhau vakarega kuteerera kuruzhinji pamusoro scandalous Zvikamu kubva kare, sezvo, nenzira, magetsi-gore 43 okuberekwa Mambokadzi Spain haisi saka akakwana, asi kuramba akatanga kutaura naye semunhu akafanira mugari wenhaka mudzimai aimbova mambo, Sofia. Kwemakore anoverengeka, mukadzi waFiripi VI anotaurwa sendarama kwezvokufuka uye akanaka mukadzi Europe. Zvinonzi kuzivikanwa kuti nyika vakanga vachigere chete zvakakwana chigaro namambo, asi mukadzi akakodzera kuva naye, uye nzira aimbova mutapi uye ikozvino mambokadzi Spain - Letitsiya Ortis.
Soviet counteroffensive pedyo Moscow. Yakatanga counteroffensive muna Battle of Moscow
Kurwisa machinda Russian Polovtsy (XI-XIII CC.). Vladimir Monomakh, Svyatopolk Izyaslavovich. Nhoroondo Kievan Rus
Biography uye basa wenhau Azara them. Azar Ilya Vilyamovich (mufananidzo)
Ndiani Aristotle ndiye? Chii chinozivikanwa, Biography, mupiro sainzi
Bestuzhev-vazoedemz: Biography uye pikicha
Monograph - chii? Ngatitaurei kunzwisisa!
Steatosis kana mafuta chiropa
Tsvuku tsvuku pairi kuruboshwe rweziso rakaipa
"Isloch" pachipatara pacho: vaaizivana, mapikicha, wongororo
Concept uye mhando dzisashande mhosva basa of Russian Federation
Fashion zvinhu. Fashionable mbatya vasikana. mbatya Fashionable vakadzi
The rwizi Oder - gang muWestern Europe
How kuverenga mari yokugadzirisa mekamuri?
How kuchenesa chiropa kumba
Kupfuura shamwari: Stella Maxwell uye Mayli Sayrus